बाल्टिमोरमा छक्का पन्जा ३ नोभेम्बर ११ प्रदर्शन हुने ! - Enepalese.com
बाल्टिमोरमा छक्का पन्जा ३ नोभेम्बर ११ प्रदर्शन हुने !
इनेप्लिज २०७५ कार्तिक २० गते २२:२९ मा प्रकाशित
यो बर्षकै प्रतिक्षित चलचित्र‘छक्का पञ्जा ३’ दुई पटक Housefull भई अब फेरी बाल्टिमोरमा प्रदर्शन हुने भएको छ । नोभेम्बर ११ को लागि टिकट उपलब्ध रहेको जानकारी सुमन पन्तले ईनेप्लिजलाई बताएका छन् ।
दीपाश्री निरौलाको निर्देशन रहेको चलचित्रमा दीपकराज गिरी, केदार घिमिरे, जितु नेपाल, बुद्धि तामाङ, शिवहरि पौडेल,दीपिका प्रसाई लगायतको मुख्य भुमिका रहेको छ । अतिथि भुमिकामा प्रियंका कार्की, स्वस्तिमा खड्का, बर्षा राउत लगायत रहेका छन् । सरकारी बिद्यालय र निजि बिद्यालयको बिषय चलचित्रले उठाएको छ ।
दिपाश्री निरौलाले निर्देशन गरेको यो चलचित्रमा दिपा र दीपकको लगानी छ । पुरुषोत्तम प्रधानको छायांकन रहेको चलचित्रले हास्यव्यंग्य कथामा सामाजिक सन्देश बोकेको छ ।
कहिले : Nov,11 @7pm
कहाँ :Venue: Horizon Cinemas Beltway Plaza
7660 Belair Rd, Baltimore, MD 21236
टिकट दर: $ १५ डलर
समय: ७ बजे
Suman Pant: (443)243-5682
Mohan Pant: ‭(443) 602-2968‬